High Quality က Black အရောင် um-KM Spanner China Manufacturer
မျက်နှာ Mills က
Collets System ကိုနှိပ်
Chuck System ကိုတူး
edge Finder ကို
Tool ကို Holder အင်္ကျီလက်
တိုင်းတာခြင်း Tools များ
BT Tool ကိုရှင် MAS403
HSK Tool ကိုရှင် DIN69893
SK ကို Tool ကိုရှင် DIN69871
NT Tool ကိုရှင် DIN2080
MT Tool ကိုရှင် DIN228
CAT Tool ကိုရှင် MAS403
R8 Tool ကိုရှင်
ISO ကို Tool ကို Holder
SK ကို Collets
ER Collets သတ်မှတ်မည်
SK ကို Spanner
Collets System ကိုနှိပ်
Collets Chuck သတ်မှတ်မည်နှိပ်
Collets Shanks နှိပ်
Chuck System ကိုတူး
key-type ကိုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
Home > ထုတ်ကုန်များ > Spanner > ER Spanner > High Quality က Black အရောင် um-KM Spanner
High Quality က Black အရောင် um-KM Spanner
မော်ဒယ်နံပါတ်။: UM-KM spanner
Name: High Quality Black Color UM-KM Spanner
Model: UM-KM Spanner
Type: ER Spanner
ထွက်နိုင်ရေး: 80000pcsamonth
အမှတ်တံဆိပ်: Tool များသစ်ပင်များ
Supply နိုင်ခြင်း: 80000pcsamonth
HS Code ကို: 8466100000
လက်ကိရိယာများ, ER Spanner / လိမ်ဖဲ့ခြင်း, CNC Spanner, လိမ်ဖဲ့ခြင်းသော့ခလောက်, screw နှစ်ခု, အခွံမာသီးများနှင့်အခြား Threaded စွဲစေလက် tools တွေကို wrenching သြဇာများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်ဖဲ့ခြင်းများသောအားဖြင့်သော့ခလောက်ဒါမှမဟုတ်အခွံမာသီး clamping ၏လက်ကိုင်ကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ကို aperture စုံ၏တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါပေါင်းလိုက်သော Shanks အင်အားသုံးတစ်လျှောက်လည်ပတ်၏ညှနျကွား၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးချသည့်အခါသော့ခလောက်ဒါမှမဟုတ်အခွံမာသီး wrenching နိုင်ပါတယ်။
1. ER Spanner နမူနာအမိန့်ရရှိနိုင်
တစ်လလျှင် 2. 80000 PCs
3.Different သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအတွက်အမျိုးအစားများ, M က, um, M က, TG အမျိုးအစား
ပလပ်စတစ်အိတ်နှင့်အတူ 4.Spanners အထုပ်
အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi , CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , HSK tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ ဒါပေါ်ခေါင်းကိုစီးရီး, collets နှိပ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ, လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Series, boring စီးရီး။
SISHUI TELI Tool များ CO ။ , LTD မှ။
SISHUI TELI Tool များ Manufacturing Co ။ , LTD မှ SISHUI စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဇုန်များတွင်တည်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်3အမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်ပါတယ်: ပထမဦးဆုံးတိကျစွာ Tool ကိုရှင်အပါအဝင် CNC စက် Tools များအဘို့အထူးထူးအပြားပြားလက်ဆောင်စနစ်, နွေဦး Collets, Rough သို့မဟုတ် Precision ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်နှိပ် Collets ဖြစ်၏ ဒုတိယထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်စင်တာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုကဲ့သို့သောအခြားစံစက်ကိရိယာတခုဆက်စပ်ပစ္စည်း, Chuck, စသည်တို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ် .;
တတိယ clientss '' နမူနာသို့မဟုတ်ရေးဆွဲအဖြစ် CNC စက် tools များအပေါ်အထူးစက်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။
1, အထုပ်: မှာလည်းပလပ်စတစ်ပုံးနှင့်သင့်တောင်းဆိုမှုများအရသိရသည်ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်။
2, Delivery အချိန်:7ရက်အတွင်းနမူနာနှင့်အခြားသူများ 35 ရက်။
ငါ avourable စျေးနှုန်း IF
1 ။ မေး: သင်စက်ရုံတစ်ရုံသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသလား
2. မေး: သင်မဟုတ်တဲ့စံထုတ်ကုန်များကိုရနိုင်မလား?
A: ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းလုပ်ရေးဆွဲ၏လက်သို့အပ်နမူနာအဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
3. မေး: သင်ဘာထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့သလဲ?
ဖြေကျနော်တို့ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်; သစ်သားအလုပ်လုပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ; စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း; tool ကို-bits & ချည်ကိရိယာများ။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : Spanner > ER Spanner
စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း MAS403 BT40 Collets Chuck
CAT40-FMB22-100 Shell ကအဆုံးစက် Arbore
SK40-ER32 CNC BT Collets ရှင်
HSK63A Collet Chuck tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
High Quality 16mm Keyless လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် Taper နှင့်အတူ key-type ကိုအကြီးစား Duty လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
Chuck BT40-APU13-110 Drilling Intergrated
High Quality NBH2084 Micro နဲ့ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ 8pcs သတ်မှတ်ရန်
BT40, F1 Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ / ရှုး / Shanks set ကို
လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း Overload clutch GT24 နှိပ် Collet
BT40 45 ဒီဂရီ Collet Chuck လုံး Pull
High Quality TAP-400R-80-27-6T 90 ဒီဂရီပခုံးမျက်နှာ Mills က
High Quality ER 25M Spanner
High Quality ER M က Spanner
High Quality ER20 M က Spanner
High Quality ER16 M က Spanner
အရည်အသွေးမြင့်မား ER Wraenches WTG-42 Wraenches
အရည်အသွေးမြင့်မား TG ER လိမ်ဖဲ့ခြင်း
ER Nut လိမ်ဖဲ့ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကို
Black ကအရောင် um-KM Spanner
High Quality um-KM Spanner
Black ကအရောင် SK ကို Spanner
High Quality က Black အရောင် SK ကို Spanner
SK က Black ဆေးထည့် Spanner
SK ကို Collet သည် Spanner
မူပိုင်ခွင့်© 2020 SISHUI TELI TOOL CO.,LTD. All rights reserved ။